मधुमेहले दृष्टिबिहिन बनाउँछ लापर्बाही गरे - ज्ञानविज्ञान
मधुमेह भएको सुरूमै आँखामा समस्यानदेखिएपनि २० वर्षपछि केही न केही समस्या देखिन्छ ।
चिकित्सककाअनुसार मधुमेहले आँखाको नानी पछाडीको नरम पर्दा (रेटिना) माप्रभाव पार्छ र आँखाको हेर्ने शक्तिह्रास हुन्छ । मधुमेह भएका व्यक्तिको रगतमाचिनीको मात्रा सामान्यभन्दा बढी हुन्छ, जसले आँखाको पर्दाका सिरा, धमनीहरूमाअसार गर्छ ।
प्रभावित रगतकानलीकमजोर हुने हुँदासजिलै पर्दा फाट्ने उनीहरू बताउँछन् । मधुमेहले मानिसलाई न्यून दृष्टि र अन्धो दुबै बनाउने तिलगंगाआँखा प्रतिष्ठानका डा. संयम बजिमायाले बताए । मधुमेहले आँखामा असर गर्छ भन्ने चेतनामानिसमाकमभएकाले पनि यो समस्या बढ्दो छ । नेपालको कुलजनसंख्याको १० प्रतिशतमामधुमेह रहेको र मधुमेह भएका बिरामीमध्ये २० देखि ३० प्रतिशतमाआँखाको समस्या देखिने डा. बजिमायाको भनाई छ । मधुमेह जनुसुकै उमेर समूहकामानिसलाई लाग्न सक्छ ।
मधुमेहकाबिरामीले नियमितआँखा परीक्षण गरिरहनु पर्ने डा.बजिमायाको सुझाबछ । महिना नपुगि बच्चा जन्मिएपनि रेटिनामा समस्या यस्तै नौ महिनानपुगीजन्मेको बच्चा र २ केजीभन्दाकमतौलकाबच्चामापनिआँखाभित्र रक्तश्रावभएर रेटिनामा असर परी पूर्ण अन्धोहुनसक्छ । महिनानपुगीजन्मेको बच्चाको एक महिनाभित्रआँखा परीक्षण गराउनुपर्छ । जसलेगर्दा आँखाको पर्दाखुम्चिनेअवस्थाहुँदैन् । डा. बजिमायाकाअनुसार कान्तिबाल अस्पतालमा सन् २००४ मा गरेको एक अध्ययनले २५ देखि ३० प्रतिशतबालबालिकामा यो समस्यादेखिएको थियो ।
पाँचवर्ष अगाडिसम्म साताको एक बच्चा यस्तो समस्यालिएर अस्पताल आइपुग्ने गरेकोउनले बताए । उनले भने, ‘हलिेसातामाचारदेखि पाँचजना सम्म आउँछन ।’ मेडिकल टेक्नेलोजीको विकासले गर्दा पनि पछिल्लो समय रोगसमयमै पत्तालाग्ने गरेको उनको भनाई छ । ३५ वर्ष उमेर पार गरिसकेपछि पहिलो बच्चाजन्माउँदापनिबच्चामाआँखाको रेटिना सम्बन्धी रोग लाग्ने गर्छ । बच्चामालाग्ने आँखा सम्बन्धी रोगको रोकथामगर्न मातृस्वास्थ्यमाध्यान पु¥याउनु पर्ने डा. वजिमायाले बताए । उनकाअनुसार गर्भावस्थामा गराउने परीक्षणले बच्चाको अवस्थाको बारेमाथाहा हुन्छ र समस्या देखिएसमयमै उपचार गर्नुपर्छ ।
यसैगरी गर्भावस्थामा रक्तचापबढ्न नदिने र बच्चालाई अक्सिजनदिनुपर्ने अवस्थाआएमाविशेष ध्यान पु¥याउनु पर्छ । यस सम्बन्धमागतशुक्रबार र शनिबार नेपाल भिटीरियो रेटिना सोसाइटीको आयोजनामा राष्ट्रिय रेटिना सम्मेलन सम्पन्नभएको थियो । रेटिनामा असर परेका बिरामीको अवस्था, रेटिनाबाट आँखामा पर्ने असरलगायतकाबारेमा सम्मेलनमा छलफल भएको थियो ।
Topics #दृष्टिबिहिन #मधुमेह
Don't Miss it डेंगुविरुद्ध नौ दिने अभियान
Up Next अनुहारको चायाँ यसरी हटाउन सकिन्छ